ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လတာတွင်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး နိုင်ငံသားများအတွက်အကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်မော်လ်တာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း နှင့်ရှေ့နေများ မော်လ်တာနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားမော်လ်တာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုမော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့်များအတွက်န်ဆောင်မှုပေး, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်နိုင်ငံသား, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံသား, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် dual နိုင်ငံသားအဖြစ်, နိုင်ငံသားနှင့်မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့် , မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသား, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသား, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှ Residency, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့် Residency, မော်လ်တာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ မော်လ်တာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ မော်လ်တာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မော်လ်တာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိစီးပွားရေးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ၊ မော်လ်တာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မော်လ်တာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, မော်လ်တာအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ, ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုလားသူ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မော်လ်တာနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မော်လ်တာနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရွှေဗီဇာ မော်လ်တာတွင်ရွှေဗီဇာ၊ မော်လ်တာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ မော်လ်တာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ မော်လ်တာရှိဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ မော်လ်တာရှိဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ မော်လ်တာရှိရွှေဗီဇာ၊ နိုင်ငံသားနှင့်မော်လမြိုင်ရှိရွှေဗီဇာ၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီ မော်လ်တာတွင်ရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ မော်လ်တာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ မော်လ်တာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်မော်လ်တာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ ၁ ချက်ဖြေရှင်းချက်” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: EUR 1,000,000
မော်လတာကျွန်းစုတွင်အခြေခံကျကျကျွန်းသုံးကျွန်းပါဝင်သည် - မော်လ်တာ၊ Gozo နှင့် Comino - စစ္စလီကျွန်းတောင်ဘက် ၉၅ ကီလိုမီတာနှင့်မြောက်အာဖရိကကမ်းရိုးတန်းမှ ၂၉၀ ကီလိုမီတာသာရှိသည်။
မော်လတာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသည်ဆိပ်ကမ်းများ၊ ကျဉ်းမြောင်းသောမြစ်များ၊ ချောင်းများ၊ သဲသောင်ပြင်များနှင့်ကြမ်းတမ်းသောအဖုံးများဖြင့်လှပသည်။ ဥရောပမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းအများစုမှလေယာဉ်ဖြင့်မော်လတာသို့ ၂ နာရီမှ ၃ နာရီခန့်ကြာသည်။
လန်ဒန်၊ ရောမ၊ ပဲရစ်၊ ဖရန့်ခ်ဖွတ်၊ ဘရပ်ဆဲလ်၊ ဂျီနီဗာ၊ အေသင်၊ အမ်စတာဒမ်၊ မက်ဒရစ်၊ မြူးနစ်နှင့်ဗီယင်နာနိုင်ငံများမှမော်လတာသို့အဆက်မပြတ်မရပ်မနားသောခရီးစဉ်များရှိသည်။ အခြားသောဆက်တိုက်ပျံသန်းမှုများကိုလည်းမြောက်အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကကန့်ကွက်မှုများမှပြုလုပ်သည်။
အီးယူနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနှင့်မော်လ်တာ၏ဗီဇာလိုအပ်ချက်များသည်အီးယူ၏မဟာဗျူဟာနှင့်ကိုက်ညီသည်။ မော်လတာနိုင်ငံသည်လည်းအလားတူ Schengen ဒေသ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရီးသွားများ၊ မော်တော်ယာဉ်များနှင့်လေးလံသောယာဉ်များအတွက်နေ့တိုင်းရွက်လှေစီမံခန့်ခွဲမှုသည် Valletta နှင့် Sicily တို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အခြားသင်္ဘောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များက Valletta ကိုအီတလီနှင့်မြောက်အာဖရိကနှင့်ဆက်စပ်ထားသည်။ သင်၏အကဲဖြတ်မှုအတွက်မော်လတာသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အနိမ့်ဆုံး EU အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်, သင်သည်ယခင်ကမော်လ်တာ၏လေကိုဖမ်းမိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော်၊ အလုပ်အကိုင်အနိမ့်ဆုံးနှုန်းနှင့်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလေထုများအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သော်လည်း၊ မော်လတာသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကျူရှင်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံသောရာသီဥတုရှိသည်။
မော်လ်တာတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်မည်သို့ဆင်တူသည်ကိုအသေးစိတ်မလေ့လာမီသင့်အားနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာသင်ပေးပါရစေ။ ၎င်းသည်မြေထဲပင်လယ်အတွင်းရှိသမ္မတနိုင်ငံကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ ဥရောပသမဂ္ဂမှလူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ Schengen ဒေသ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားခြင်းမရှိသောပွင့်လင်းသောတံခါးများရှိပြီးသင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုလက်တွေ့ကျသောလေ့ကျင့်ရေးစနစ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအပြည့်ဖြင့်ပေးနိုင်သည်။ အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းသည်သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက်အထူးသဖြင့်ကလေးများနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်အတော်ကြာကြိုးစားနေနိုင်သည်။ လူငယ်များအတွက်အခြေချနေထိုင်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည့်အရာတစ်ခုမှာသူတို့အတွက်ရွေးချယ်ထားသောကျောင်းဖြစ်သည်။
မော်လ်တာရှိလေ့ကျင့်ရေးမူဘောင်ကိုအလွန်အမင်းနေရာချထားပြီးကျောင်းအများစုသည်ဗြိတိသျှပညာရေးအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာပြီးအမျိုးမျိုးသောဘာသာရပ်များမှရရှိသည်။ ကလေးများသည် ၁၆ နှစ်အထိမော်လတာတွင်အတန်းတက်ရန်မသင်မနေရဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာအရေးပေါ်ဆေးခန်းနှစ်ခုလုံးသည်မျက်မှောက်ခေတ်ဆေးခန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်းများကိုနေရာအနှံ့တွင်သာယာဝပြောရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကထောက်ခံသည်။
မော်လ်တာ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုမူဘောင်သည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးငါးနေရာတွင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာတည်ရှိသည်။ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြင့်ဆက်တိုက်တည်ရှိနေသောမော်လတာစီးပွားရေးသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်လက်မဲ့ ဦး ရေနည်းပါးသည်။ စီးပွားရေးသည်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုမရှိသောကုန်သွယ်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း (အထူးသဖြင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ) နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်မှီခိုနေရသည်။ ဥရောပစီးပွားရေး၏ငွေကြေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ယူရိုဇုန်၊ ယူအက်စ်နှင့်စင်္ကာပူတို့ဖြစ်သည်။
အရှေ့ဥရောပနှင့်မြောက်အာဖရိကရှိအခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနှင့်အပြိုင်အဆိုင်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူမော်လ်တာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည်အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မော်လတာရုပ်ရှင်ကော်မရှင်သည်မီးမောင်းထိုးပြသည့်ရုပ်ရှင် (Gladiator, Troy, Munich and Count) ကိုအကျွမ်းတဝင်မရှိသောရုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများအားစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုကူညီပေးနေသည်။ Monte Cristo မှ World War Z သည်အခြားသူများအကြား၊ မကြာသေးမီနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမော်လ်တာတွင်ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသည်)၊ ကြော်ငြာများနှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများဖြစ်သည်။ မော်လ်တာရှိအခွန်များကိုအိမ်ပေါ် မူတည်၍ ကောက်ခံပြီးဝင်ငွေအားလုံးနှင့်အချို့သောအရင်းအနှီးများတိုးမြှင့်သည်။
မော်လ်တာ၏အခွန်ဆိုင်ရာမူဘောင်နှင့်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောအခွန်နှစ်ဆကောက်ခံသည့်အဖွဲ့အစည်း (၇၀ ကျော်) တို့ကသင့်လျော်သောစီစဉ်ခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်းဖြင့်စျေးကစားသူများသည်မော်လ်တာအားအခြေခံအဖြစ်အသုံးချခြင်းဖြင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာထိရောက်မှုကိုပြီးမြောက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
အပြည့်အ ၀ စာရင်းပေးသွင်းထားသည့်မူဘောင်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားပေးသောအကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်ပြန်အမ်းနိုင်သောအခွန်ခရက်ဒစ်အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မော်လ်တာတွင်တည်ထောင်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများသည်အမြတ်အစွန်းများရရှိသည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်မော်လတာသည်ဒေသခံများအားအခွန်အခအခြေအနေကိုအခြေ ပြု၍ အခြေချနေထိုင်သူများကိုအမြတ်အစွန်းရရန်အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့်လူများအတွက်စံပြနေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းကိုပေးသည်။
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ မော်လ်တာ
နေထိုင်မှု4နှစ်ပြီးနောက်
လှူဒါန်းခြင်း + နှောင်ကြိုး + Real Estate
မော်လတာသည်အလွန်လှပသောတိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါနိုင်ငံသည်ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် Schengen ဇုန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မော်လတာတွင်ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိသည်။ နိုင်ငံသားတွေဟာလူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားတယ်။ Maltese နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်သင့်အားအီးယူဒေသရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနေထိုင်ရန်နှင့်သွားလာရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ လျှောက်လွှာမှာအလွန်တင်းကျပ်သည်။ အနီးကပ်မိသားစုဝင်များသာလျှင်မော်လ်တာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ငွေရေးကြေးရေးအရမှီခိုနေသောမိသားစု ၀ င်များသာလျှင်အခကြေးငွေများပေးမည့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ မိသားစု ၀ င်များသည်ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၊ ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများ (သို့) သင့်အပေါ်မှီခိုနေသည့်သင့်ကလေးများနှင့်သင်သို့မဟုတ်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏မိဘနှင့်အဘိုးအဘွားများဖြစ်နိုင်သည်။
၁၂ လနေထိုင်ပြီးသည်နှင့်သင်မော်လတာနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၁၂ လတာကာလအတွင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောက်ရှိမှုကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ၊ နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သာသင့်သည်။ သင့်အနေဖြင့်နိုင်ငံအတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုကို ၅ နှစ်တာကာလအတွင်းထိန်းသိမ်းထားရန်လိုလိမ့်မည်။ သင်သည်မော်လ်တာအစိုးရမှအတည်ပြုပေးမည့်ဘဏ္financialာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်ထည့်ဝင်ရန်လိုအပ်သည်။ မော်လ်တာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုတစ်သက်တာအတွက်ပေးအပ်ထားပြီးသင်၏ကလေးများအားလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်အစိုးရမှအတည်ပြုထားသောစီမံကိန်းများတွင်ယူရို ၁၅၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအနည်းဆုံး ၅ နှစ်ထားသင့်သည်။
သင့်အနေဖြင့်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေသို့ထည့်ဝင်ငွေကိုယူရို ၆၅၀,၀၀၀ ပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
အနည်းဆုံး (၅) နှစ်တာကာလအတွင်းသင်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုမော်လ်တာတွင်ငှားရန်သို့မဟုတ်ငှားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အိမ်ခြံမြေတစ်ခုဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ပါကအနည်းဆုံးယူရို ၃၅၀၀၀၀ ၀ ယ်ယူရလိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးယူရို ၁၆,၀၀၀ နဲ့ငှားနိုင်ပါတယ်။
အပိုဆောင်းယူရို ၇၅၀၀ နှင့်အစိုးရအခွန်သည် ၇၈၀၀၀ မှစတင်သည်။ လျှောက်ထားသူ ဦး ရေနှင့်သက်တမ်းပေါ် မူတည်၍ အခကြေးငွေများကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ မော်လတာအတွက် ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုမော်လ်တာနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်၊ မော်လ်တာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံတွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မော်လ်တာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မော်လ်တာမှ Golden Visa သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုမှကန့်သတ်ရုံမျှသာမဟုတ်၊ မော်လ်တာမှလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မော်လ်တာမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ဘဏ္orာရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သောမော်လ်တာသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ မော်လ်တာရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်အခြားများစွာရှိသည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်မော်လ်တာသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ မော်လ်တာအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်နိုင်ငံသားအဖြစ်, မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင်နိုင်ငံသားအဖြစ်နှင့်မော်လ်တာအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ ခုသို့မော်လ်တာနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ။
မော်လ်တာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့မော်လ်တာမှစီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့မော်လ်တာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံသို့မော်လ်တာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
မော်လ်တာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံသို့မော်လ်တာမှစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကမော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုလျှင်မော်လ်တာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မော်လ်တာရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးမော်လ်တာရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Malta နိုင်ငံသား
မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမော်လတာနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ မော်လတာသို့မဟုတ်မော်လတာသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
မော်လ်တာအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်မော်လ်တာရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမော်လ်တာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်မော်လ်တာမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ မော်လ်တာတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်မော်လ်တာသို့ဖြစ်စေ၊
နိုင်ငံသားအဖြစ် မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် မော်လ်တာ၌တရားမဝင်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် မော်လတာအတွက် မော်လ်တာရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မော်လ်တာရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ မော်လ်တာတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက်မော်လ်တာအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်မော်လ်တာအားထောက်ပံ့မှုမရပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် မော်လတာအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု မော်လတာအတွက် မော်လ်တာရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မော်လ်တာ မော်လ်တာရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား မော်လ်တာအတွက်ရှေ့ရပျ မော်လတာရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးကိုမထောက်ပံ့ပါ
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်မော်လ်တာအတွက်ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သော်လည်းမော်လ်တာရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်ထားမှုကိုအတည်ပြုရန်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ နိုင်ငံသားအဖြစ် မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကမော်လ်တာအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးပါတယ်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောမော်လ်တာအတွက်တရား ၀ င်အေးဂျင့်များနှင့်မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့ရွက်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသောနိုင်ငံသား။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုမော်လ်တာနိုင်ငံမတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်မော်လ်တာအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင် Malta အပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်။
အကယ်၍ သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုမော်လတာနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပျက်ကွက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျငွေကိုမော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ မော်လ်တာအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျငွေမှာ Malta အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခများဖြစ်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ မော်လတာအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မော်လတာတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူမော်လ်တာသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အနေဖြင့်၊ သင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်မော်လ်တာတွင်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း မှလွဲ၍ မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာနှင့်အခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းကိုမော်လ်တာအတွက်အခြားအကြံပေးများမှပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမော်လ်တာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။
မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမော်လ်တာအတွက်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။
မော်လ်တာသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် မော်လ်တာမှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် နှင့်မော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းကိုလည်းကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များနှင့်လည်းကူညီနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်သင်အတွက်မော်လတာနိုင်ငံတွင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည် မော်လ်တာအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် Malta တွင်ရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် မင်းစီစဉ်မယ်ဆိုရင်မော်လတာ မော်လ်တာရှိလက်ရှိစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် မော်လတာမှာချက်ချင်းစတင်ဘို့။
မော်လတာရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ မော်လ်တာရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် မော်လ်တာအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
မော်လတာအတွက် Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
မော်လ်တာအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ မော်လတာအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, မော်လ်တာအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
မော်လတာရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
မော်လတာတွင် setup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက်မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း မော်လ်တာ.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုမော်လတာနိုင်ငံ၌ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်
မော်လတာတွင် Web ဒီဇိုင်း
မော်လတာတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မော်လ်တာရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မော်လတာတွင် App Development
မော်လ်တာအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပေးအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မော်လ်တာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ မော်လ်တာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်မော်လ်တာတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ မော်လ်တာတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်မော်လ်တာတွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရှိပြီး၊
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ သင်မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားလျှင်မော်လတာနယ်မြေတွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်မော်လ်တာကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - Malta တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်မော်လ်တာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်မော်လ်ဒိုက်၏နေထိုင်မှုကိုမော်လ်ဒိုက်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားခြင်း၊ မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ မော်လ်တာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ မော်လ်တာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ မော်လတာမှာ။
မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် မော်လ်တာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကမော်လတာတွင်နေထိုင်ခွင့် မော်လ်တာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်၊ မော်လ်တာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်မော်လ်တာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်မော်လ်တာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနိုင်ငံသားကထောက်ခံသည်။ မော်လ်တာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မော်လ်တာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း အကောင်းဆုံးမှာမော်လ်တာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမော်လ်တာအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
စျေးသက်သာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု Malta | မော်လ်တာရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေမော်လတာတွင် မော်လတာရှိတတ်နိုင်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ မော်လ်တာအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးများ မော်လ်တာအတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
မော်လ်တာနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုမော်လ်တာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံခြင်းစသည်တို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ မော်လ်တာအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ မော်လ်တာအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မော်လ်တာနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ မော်လ်တာအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်မော်လ်တာအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ မော်လ်တာမှာအကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်မော်လ်တာရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
မော်လ်တာအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု မော်လတာနိုင်ငံရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ မော်လတာနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ မော်လတာနိုင်ငံရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ မော်လ်တာအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့မှတစ်ဆင့်မော်လ်တာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်မော်လ်တာ၏နေထိုင်မှုခွင့်ပြုချက်ကိုမော်လ်တာရှိရွှေဗီဇာဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ မော်လ်တာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ မော်လ်တာရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်မော်လ်တာအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ မော်လ်တာရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်မော်လ်တာရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်မော်လ်တာအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
မော်လ်တာအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | မော်လ်တာရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ မော်လတာရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ မော်လတာရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ မော်လ်တာအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမော်လ်တာနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည်မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များအတွက်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်မော်လ်တာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးဆောင်ရပြီး၊
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအာရှမှမော်လ်တာနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသား၊ အာဖရိကမှမော်လ်တာနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှမော်လ်တာနိုင်ငံသားနိုင်ငံသား၊ တောင်အမေရိကမှမော်လ်တာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မလေးရှားမှမော်လ်တာနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှမော်လ်တာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှမော်လ်တာနိုင်ငံသားပြုမှု၊ နီပေါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အိန္ဒိယမှမော်လ်တာနိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံသား ယူအေအီးကနေမော်လ်တာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Malta မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင် Malta အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအရေးကြီးသောအသုံးအနှုန်းများ
အလုပ်အကိုင်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း (Malta) (Jobsplus)
MTA - မော်လတာခရီးသွားလုပ်ငန်းအာဏာပိုင်
Enemalta - Maltese ရေနှင့်လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ
MMLA - Malta ရေကြောင်းဥပဒေအသင်း
FC အသင်း - Freeport ကော်ပိုရေးရှင်း
COC - ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
Times of Malta - တိုင်းမ် Times နှင့် The Sunday Times (သတင်းစာများ)
ADT - မော်လ်တာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန (မော်လတာ)
IMLI - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းဥပဒေအင်စတီကျု
ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦး စီးဌာန (မော်လတာ)
IMP - ပေါင်းစည်းထားသည့်ရေကြောင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ
ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊
ပြည်ထဲရေးနှင့်လုံခြုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန
ECSA - ဥရောပအသိုင်းအဝိုင်းသင်္ဘောတင်သူများအသင်း
Yellow Pages - မောလ်အဝါရောင်စာမျက်နှာများ
EMD - ဥရောပရေကြောင်းဆိုင်ရာနေ့များ
British High Commission မော်လတာနိုင်ငံ
UK - ပင်စင်ဝန်ဆောင်မှု
Malta - Gozo မှဖျော်ဖြေရေးလမ်းညွှန်
EMSA - ဥရောပရေကြောင်းလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ
တော်ဝင်ဗြိတိန်ကို Legion of Honour
PBS - ပြည်သူ့အသံလွှင့်ဌာန (မော်လတာ)
REMPEC - ဒေသတွင်းရေကြောင်းညစ်ညမ်းမှုအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုစင်တာ
IMO - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း
link ကိုမှ မော်လ်တာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , မော်လ်တာမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်